ब्लाइन्डमा चारै कोचको ‘स्ट्याण्डिङ अवेसन’, ब्याटलमा आउट, यस्ता छन् कारण - Everest Dainik - News from Nepal
ब्लाइन्डमा चारै कोचको ‘स्ट्याण्डिङ अवेसन’, ब्याटलमा आउट, यस्ता छन् कारण
काठमाडौंः हिमालय टेलिभिजनबाट प्रशारण भइरहेको ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल’ को ‘ब्लाइन्ड अडिसन’मा चारै जना कोचलाई फर्काउँदै ‘स्ट्याण्डिङ अवेसन’समेत पाएका टीकापुर कमल विष्ट ‘ब्याटल राउण्ड’बाट बाहिरिन पुगे । जुन अनपेक्षित थियो ।
टिम प्रमोदमा रहेका विष्ट आउट हुँदा मिचु धिमाल अघिल्लो चरणमा पुगिन् । कोच प्रमोद खरेलले कमललाई छानेनन्, मिचुलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरे ।
कमल आउट हुँदै गर्दा कार्यक्रम प्रस्तोता सुशिल नेपालले भनेका थिए, ‘कमल जुन तपाईंको ब्लाइन्ड अडिसनमा प्रस्तुती थियो, त्यसले तपाईलाई हामीले अन्तिमसम्म द भ्वाईमा देख्नेछौं भन्ने लागेको थियो । तर, तपाईंलाई ‘ब्याटल राउण्ड’बाटै विदा गर्नुपर्दा दुःख लागेको छ ।’ हो, प्रस्तोता नेपालले भनेजस्तै थुप्रै दर्शक तथा स्रोताले पनि कमललाई भ्वाइसको अन्तिमसम्म पुग्छ भन्ने सोचका थिए ।
सबैले अन्तिम राउण्डसम्म पुग्ने अपेक्षा गरेका कमल ब्याटल राउण्डबाटै किन बाहिरिए ? के उनी त्यो भन्दा अगाडि बढ्न सक्षम थिएनन् ? त्यस विषयमा अनेक टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
किन बाहिरिए कमल ?
‘ब्याटल राउण्ड’मा कमलकी प्रतिस्पर्धी थिइन् मिचु धिमाल । उनी कोच प्रमोदका एडभाइजर भानु ढकालकी शिष्या हुन् । ‘ब्याटल राउण्ड’मा उनीहरूलाई ‘कहिले घाम कहिले पानी, आधा आधा जीन्दगानी’बोलको गीत दिइएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ मा सनिशले पाए गीत गाउने मौका
उक्त गीतको ओरिजिनल स्केल एफ थियो । तर, मिचुलाई सहिजोका लागि स्केल झारेर डी बनाइयो । मिचुले हाई स्केलमा गाउन सकिनन् । कोच प्रमोद र एड्भाइजर ढकालले मिचुको सहजताका लागि स्केल घटाए । त्यसको प्रत्यक्ष असर कमलमा पर्यो । कमललाई गाउनमा केही असर पर्यो । कमलले स्टेल ‘इ’ भन्दा तल झारेर गाउन नसक्ने बताएका थिए । तर, कोचले मिचुको सजिलोका लागि उनको कुरा सुनेनन् ।
यो कुरा कमलले विभिन्न युट्युवलाई दिएका अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।
कोचहरूलाई एउटा अधिकार हुन्छ, त्यो हो–स्टील । एक कोचको ट्यालेन्टलाई अर्को कोचले एक जना स्टील गरेर आफ्नो टिममा लिन पाउछ । कमलको प्रस्तुती अन्तिम दिनमा थियो । त्यतिबेलासम्म कोच राजुसँग मात्रै स्टीलको अधिकार थियो । तर, राजुले कमललाई स्टील गरेनन् ।
भ्वाइस अफ नेपाल’ को ब्लाइन्ड अडिसनमा कमलको प्रस्तुती देखेर कोच राजुले पनि फर्किएका थिए र स्ट्याण्डिङ अवेसनसमेत दिएका थिए, निकै तारिफ गरेका थिए । तर, उनले कमलमाथि भएको अधिकार प्रयोग गर्न कञ्जुस्याई गरे । जसका कारण कमलले ब्याटल राउण्डबाटै बिदा हुनुपरेको कमलका समर्थकले सामाजिक सञ्जालमा गुनासो गरेका छन् ।
चारै जना कोचहरूले कमलप्रति नकरात्मक कमेन्ट गरे । कमलको प्रतिस्पर्धी मिचु कोच प्रमोदकै जिल्ला झापाको रहेको तथा कोच प्रमोदको एडभाइजर ढकालकी शिष्या हुन् । त्यसकारण पनि मिचुका बारेमा कोचहरूले राम्रो तथा कमलका विपक्षमा कमेन्ट गरेको देखिन्छ ।
कोच दिपले कमलबारे टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘हर्कत पुगेनन् ।’ कोचको काम गल्ती देखाउने मात्रै हैन । कहाँ के गल्ती भयो, कसरी सुधार सकिन्छ, त्यो उपाय दिनुसक्नुपर्छ । तर, कोच दिपले त्यो कष्ट गरेनन्, मात्रै नकरात्मक कमेन्ट गरिरहे । मात्रै कमेन्टका लागि कमेन्ट गरेजस्तो ‘हर्कत पुगेन’ भनेर मौन बसिदिए ।
रेकर्डिङमा सहभागी एक दर्शकका अनुसार कमलले लो स्केलमा गाएको भन्दै कोच दिपले मिचुको पक्ष लिएका थिए । तर, आफैं लो स्केल गराइएको भन्दै टिम प्रमोदले त्यो कमेन्ट डिलिट गर्न लगाए र प्रशारण गरेनन् । कोच आस्थाले ‘स्याड मोड’मा गाएको भन्दै कमलको पक्ष लिइनन् । उक्त कमेन्टलाई पनि प्रसारण गरिएन । कारण थियो, उक्त गीत नै स्याड मोडमा गाउनुपर्ने थियो, विछोडको गीत थियो ।
‘सँगसँगै हिडे पनि वारिपारि हुनुरैछ,
चित्त बुझाई आफ्नो भाग्य आँसुले नै धुनुरैछ’
गीतको यो हरफले नै भन्छ गीत स्डाड मोडमा गाउनुपर्ने कि खुसी हुँदै, हर्कत देखाएर ?
अन्तिममा कोच आस्थाले महिला सशक्तिकरण (वेमेज इम्पावरमेन्ट) भन्दै आफूले छान्नु परे मिचुलाई छनौट गर्नेसम्म कमेन्ट गर्न भ्याइन् । अन्य कोचहरूका नकरात्मक कमेन्टले पनि प्रमोदलाई निर्णयमा समस्या परेको थियो र उनी बाध्य भए, मिचुलाई ‘नकआउट राउण्ड’मा लिन ।
हुन त प्रमोदले पनि मिचुको निकै बयान गरेका थिए । धिमाल जातबाट अन्य कोही कलाकार नभएको भन्दै उनलाई जसरी पनि अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा प्रमोदको कमेन्ट सुन्दा प्रष्टै हुन्छ ।
कमललाई कोचहरूले पक्षपात गरेको भन्दै फेसवुकमा अन्जान मुनाले आक्रोश पोख्दै कोचहरुलाई मेन्सन गरेर यस्तो स्टाटस लेखेकी छिन् :
को हुन् कमल विष्ट ?
कैलालीको टीकापुरका कमल विष्ट ७ वर्षदेखि श्रीकृष्ण गुरुकुल सङ्गीत पाठशालामा शास्त्रीय सङ्गीत सिकिरहेका छन् । गुरु तिलक पेलासँग शास्त्रीय सङ्गीत सिकिरहेका उनले शास्त्रीय सङ्गीत सिकाउँदैसमेत आएका छन् ।
रेडियो नेपालमा भ्वाइस टेस्टमा उत्तिर्ण कमलले आधुनिक गीतमा ग्रेड ए प्राप्त गरेका छन् । ए ग्रेड पाउनका लागि अन्य तीन वटा ग्रेड पार गर्नुपर्दछ । तर, आधुनिक गीत गायनमा निखारिसकेका कमलले सिधैं ग्रेड ए प्राप्त गरेका थिए ।
ट्याग्स: ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल’, कमल विष्ट